दलभित्र सामन्ती चिन्तन मौलाउँदै – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
दलभित्र सामन्ती चिन्तन मौलाउँदै
२०७१ बैशाख २, मंगलवार ०२:५३ गते
समानुपातिक प्रणाली राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने तथा कार्यपालिका तहमा कहिल्यै सहभागी हुन नपाएका पिछडिएका जाति तथा समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई पनि आप्mनो राज्यको अनुभूति दिलाउनका लागि तय गरिएको एउटा विशिष्ट राजनैतिक पद्धति हो । नेपाल बहुजाति तथा बहुभाषी मुलुक भएको र यहाँ थुप्रै पिछडिएका समुदाय भएकाले तिनलाई पनि संविधानसभामा सहभागी गराउने अभिप्रायले प्रत्यक्ष प्रणालीका अतिरिक्त यो प्रणाली पनि अपनाइएको हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यसबारे धेरै कुरा थाहा नभएको र नेतृत्व पंक्तिमा मह¤वाकाङ्क्षा पनि पैदा भइनसकेको सन्दर्भ थियो र यसले उग्र विवादको रूप लिएन । अर्को कुरा, नेतृत्वले पनि सकेसम्म समानतामूलक ढाँचामा सहभागिता गराउने प्रयत्न गरे पनि । त्यसमा खासै गुट उपगुट देखा परेनन् ।
माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ पनि एकतिहाइ सभासद सदस्यमा जित हासिल गरेको थियो भने समानुपातिकतर्फ पनि यथेष्ट सदस्य संख्या पाएको थियो । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सामान्यतया वचन उल्लंघन नै हँुदैन थियो । एमालेमा चरम् हारको पीडाबोध थियो भने गुटबन्दीको खास मौलाउँदो अवस्था पनि थिएन र पार्टीको ह्वीप उल्लघंन पनि हुने अवस्था थिएन । अन्य मधेशवादी दलहरूमा केही असन्तुष्टि त थियो नै, तर त्यसलाई कुनै न कुनै आश भरोसमा शान्त पारिएको थियो । अन्य दलहरूमा त्यस्तो ठूलो मह¤वाकाङ्क्षा पैदा पनि नभएकाले आफू नपर्नुको पीडा व्यक्त हुनै पाएन । सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व गराउने नाउँमा राजनैतिक चेतना नै नभएका, अशिक्षित, वर्गीय चेतना पनि नभएका, केही अराजक र केही रातो पासपोर्टसम्म बेच्न तयार मान्छेहरूले अवसर पाए । फलतः जम्बो त्यो पहिलो संविधानसभाको सभासद् बन्नु नै कतिपयलाई बिडम्वना लाग्यो । अर्काे कुरा, संविधानसभाले राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्नै नसकी विघटित भएपछि त झन् लाजले हिँड्नै नसकिने र कतै गएर बोल्नै नमिल्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । सम्भवतः सभासद्हरू इतिहासमै लज्जित र हेयपात्र सम्झन थालेका थिए आपूmहरूलाई । हुन पनि साँच्चै नै समाजमा घृणाका पात्र बनेका थिए उनीहरू ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने बेलासम्ममा स्थिति अर्कै भइसकेको थियो । केराको गुवो ह्वात्तै पलाएझैँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पनि पुनः सभासद् बन्ने मह¤वाकाङ्क्षा ह्वात्तै पलाएर आयो । प्रत्यक्षतर्फको टिकट पाउने सन्दर्भमा उनीहरूले निकै कसरत गरे भने समानुपातिक सूचीमा सूचीकृत हुन पनि नेता र गुट उपगुटको पुच्छरै पक्डेर लागि परे । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका कालखण्डमा राजनैतिक संस्कार र संस्कृतिमा यति धेरै ह्रास आयो कि राजनैतिक नैतिकता नै समाप्त भयो ।
नेतृत्वले पनि आप्mनो कार्य कुशलता, दक्षता, सांगठनिकता, राष्ट्रिय मुद्दा र निर्णय क्षमताका आधारमा नभई गुट–उपगुट सृजना गरेर हुन्छ कि वा अन्य सामदाम दण्डभेदआदि नीति अख्तियार गरेर हुन्छ, पार्टीभित्र र संसदीय दलमा समेत आप्mनै बहुमत पुग्ने गरी आप्mना पक्षधरलाई मात्र छनोट गर्ने कार्य भयो । यस्तै निर्वाचनमा आपूmलाई सर्वाधिक रकम सहयोग गर्ने जिताउनमा अभूतपूर्व भूमिका खेल्ने आप्mना क्षेत्रकालाई धेरैभन्दा धेरै सभासद् बनाउने कार्यले पनि समानुपातिक पद्दति नै विकृत बन्न पुग्यो । त्याग, बलिदान र लामो सांगठनिक कुशलता हासिल गरेका कार्यकर्ताको पार्टीमा कुनै मह¤वै
रहेन । सबै आफू र आप्mनैका लागिमात्र सोच्न थाले । मनग्गे पैसा खर्चिन सके सहजै सभासद् बन्न सकिने नजिर बस्यो ।
समानुपातिक सभासद् छनोट गर्ने कार्य निश्चय पनि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै ज्यादै कठिनतम कार्य हो । ६ फिटे मान्छेलाई कठ्यागिँ्रदो जाडोमा ३ फिटे सिरक दिए उसले कतातिर ओढ्ने ? शिरतिर ओढे खुट्टा उदाङ्गो, खुट्टातिर ओढे शिर उदाङ्गो भएजस्तै हो । ३३५ बाट चाहे ९१ होस् चाहे ८४, चाहे ५४ या ६ वा ४ नै । उत्तिकै सशक्त र कर्मठ योद्धाहरूबाट सीमितलाई रोज्दा पक्कै सबै पर्दैनन्, कतै न कतै कमी–कमजोरी त रहन्छ नै । यो तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छँदैछ ।
तर, यो छनोट पद्दति कत्तिको न्याय संगत छ त ? कत्तिको वैज्ञानिक पनि छ र कत्तिको इमान्दारिताको निर्वाह गरिएको छ ? भन्नेमा भर गर्दछ । नियत सफा भए, कसैको टाउको दुखाई नै हँुदैन । नहँुदामा नै हो चित्त दुखाई हुने । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअनुसार दलहरूलाई प्राप्त सदस्य सङ्ख्याअनुरूप सभासद् छनोट गर्ने क्रममा प्रत्यक्षतर्फको टिकट छनोट गर्दाभन्दा व्यापक जनआक्रोश पैदा भयो । यो आक्रोश कुनै एक वा दुई दलमा मात्रै होइन प्रायः यो सम्पूर्ण दलमा नै देखा प¥यो । राप्रपा नेपाल त दुई चिरा भयो । अन्य दलमा पनि पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड भए । एनेकपा माओवादीमा गम्भीर राजनैतिक संकट देखा परेको छ ।
एमालेले रिसोट संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएरै भए पनि अन्तिम नामावली तय ग¥यो तर यसमा खनाल र ओली नै ज्यादा हावी भए र एमालेका नभई आ–आप्mना गुटलाई परिपोषित गरे । त्यस्तै माधव नेपाल र विष्णु पौडेलहरूले पनि ठूलै कसरत गरेर केही आप्mनो पोल्टामा पारे । उनीहरूले आ–आप्mनो रुचिलाई ज्यादा ध्यान दिँदा रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र राई, ठाकुर गैरे, चन्द्रकुमारी पुनजस्ता आजीवन पार्टीका निम्ति जीवन अर्पिने कार्यकर्ताहरू पाखा पारिए ।
कांग्रेसले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच ६०–४० को नीति लिए र कोइरालाका ६० अन्तर्गतको भागमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ आदिले बिलो लगाए । फलतः त्यहाँ पनि गम्भीर चित्त दुखाई देखियो । गगन थापा र रामशरण महत आदिले खरो टिप्पणी गरे र रामचन्द्र पौडेलले त बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा सत्य एवम् तथ्य खोल्न बाध्य हुनुप¥यो । एमाओवादीमा यसले ठूलै ज्वालामुखी विस्फोट गर्ने सम्भावना पैदा गरेको छ । खास गरी डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षसमक्ष लिखित विमति नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । एमाले र काँग्रेसले उच्च नेतृत्वभित्र सभासद् संख्या बाँडफाँडमा सहमति गरिसकेकाले पार्टी नै टुक्रिने खालका विस्फोट चाहिँ भएनन् तर एमाओवादीमा शीर्ष नेतृत्वबीच यस्तो नगरिएकाले निकै भूकम्पीय तरंग पैदा भएका छन् ।
सानो–ठूलो जेजत्रो र जेजस्तो भए पनि यस्तो प्रवृत्ति शीर्ष नेतृत्वकै अकर्मण्य प्रवृत्तिबाट सृजित हुन् । जसले यो पद्धतिलाई नै अर्थहीन सिद्ध गरि दियो । त्यसो त, गएको संविधानसभामा सहमतीय पद्धतिलाई ज्यादा प्रभावित पार्ने र विध्वंसको मार्गमा लैजानमा प्रेरित गर्ने पनि यसै पद्धतिमार्फत् आएकै सभासद्हरू नै थिए भन्ने बुझाइ जनसाधारणमा व्याप्त रहेको थियो, कदाचित यो सत्य पनि हो ।
सही विचार र दृष्टिकोणले यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको भए पनि यो लोभी, पापी, स्वार्थी र धूर्त नेतृत्वहरूकै मात्र बाहुल्य रहेको यो मुलुकमा यो पद्दति बाँदरका हातमा नरिबल उक्ति चरितार्थ भएको छ । यसलाई आगामी वर्षहरूमा पनि पुनरावृत्ति गरिए यो देशमा थप अस्थिरतामात्र पैदा हुनेछ । यसर्थ आगामी निर्वाचनहरूमा यस पद्दतिको पुनरावृत्ति गर्नेै हुन्न । यसै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी यस पद्दतिकै पटाक्षेप गर्नु जरुरी छ । अर्को कुरा, जवसम्म दलहरूमा केन्द्रिकृत पद्दति समाप्त हुँदैन । न पुँजीवादी सामन्त र अर्धसामन्त समाप्त होलान् तर पार्टीभित्रै तीभन्दा पनि ठूला सामन्तहरूको विकास भइरहेको छ ।
यस्तो अलोकतान्त्रिक सामन्त प्रवृत्ति रहँदासम्म वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दलभित्रकै दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले त गर्न पाइरहेका छैनन् भने सर्वसाधारणले यस्तो अनुभूति गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँँखा तरी मर’ भन्ने उक्ति सहर नै छ भन्दा कत्ति अर्घेलो हुँदैन भन्ने लाग्दछ । यसैले राजतन्त्रसँगै सामन्त समाप्त भएको ठान्नु नै भूल हो एउटा सामन्तका सट्टा रक्तवीज झैं दलै पिच्छे र संस्थाहरू पिच्छे हजारौँ सामन्त जन्मेका छन् जसले सोझा–सिधा, सज्जन–कर्मठ, न्यायप्रेमी, विकासप्रेमी, त्यागी, जनप्रियहरूमाथि दण्ड बर्साएर आसेपासे, नातागोता र भाइभारदारलाई नै पोषित गरिरहेछन् भने तिनका अघि रुनु कराउनु र चित्त दुखाउनु भैंसीका अघि वीन बजाउनुजस्तै मात्र हो । एउटा वीषको वृक्ष मासेर फेरि अर्को प्रजातिको तर थुप्रै वीषका वृक्षहरू रोपेर मल जल गर्नु र त्यसबाट अमृतको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो यो सामन्ती चिन्तन बोकेको वर्तमान राजनैतिक दलहरूप्रति आशा र भरोशा गर्नु सायद् जनताकै अधिक मह¤वाकाङ्क्षा हो । यदि यस्तै प्रवृत्तिमात्र जारी रहे दलहरुप्रति पुनः पैदा भएको आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत भई यो देशलाई सही गति दिन भारतमा अन्ना हजारेले चलाएको आन्दोलनझैं नेपालमा पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा एउटा आन्दोलनको आँधी हुरी उठी वर्तमान संरचना नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसर्थ नेतृत्वले बेलैमा सकारात्मक कार्य उन्मुख हुनु अपरिहार्य छ ।